SEMPAMA MAHAJANGA: MIARA-DALANA AMIN’NY SOLOMBAVAM-BAHOAKAN’NY FANOVANA
On mai 16, 2018 1 153
Soratra sy sary: J.R (Mahajanga)
Hanampy ny solombavam-bahoaka ho an’ny fanovana amin’ny fitakiana ny zony, ny mpampianatra mpikambana ao amin’ny Sempama (Sendikan’ny Mpampianatra Malagasy) eto Mahajanga. Efa tamin’ny fiandohan’ny herinandro no nitokona tao amin’ny Lycée Philibert Tsiranana izy ireo. Efa tsy nianatra ny mpianatra tao amin’ity Lycée ity nanomboka ny talata 15 may.
Niverina nanao fanambarana indray izy ireo androany maraina. Hiara-hientana amin’ny mpampianatra ao amin’ny Sempama manerana ny nosy ny avy eto Mahajanga, araka ny fanambarana. Miantso ny mpampianatra rehetra mba hitokona izy ireo. Nambaran’ny solon-tenan’ny mpampianatra fa hihamafy ny fitakiana, hidina hitety sekoly izy ireo manomboka rahampitso. Hitaona sy hampitsahatra izay mbola mampianatra sy izay manohy ny asany.
Ny zo fototra amin’ny maha mpampianatra no ilazan’ireto mpampianatra amin’ny Sempama ireto fa hanaovana ny fitakiana miaraka amin’ny solombavam-bahoaka ho an’ny fanovana, hoy hatrany ny fanazavan’ny mpitarika eto Mahajanga.
» Tsiahivina fa efa ela no nisian’ny fitakiana tamin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, saingy tsy nisy vahaolana izany, ka fotoanany izao. Takiana ny fampiakarana ny karaman’ny mpampianatra amin’ny ankapobeny, ny tambin-karama eo amin’ny hofan-trano. Takiana ny hampitoviana ny karaman’ny samy mpiasam-panjakana mitovy grady sy mari-pahaizana, tsy ekeny ny karama vary masaka. », hoy ny navoitran’ny mpitarika ny tolona eto Mahajanga.
Nilaza hatrany ny mpandaha-teny fa: » Ny mpampianatra no miasa mafy indrindra sy mamolavola ny mpianatra ho olom-banona. Tsy arak’izay anefa ny zava-misy fa ny mpampianatra no tena ambany karama sy tsy voakarakara indrindra ».
Etsy andaniny, manahy ny amin’ny fianaran-janany ireo ray aman-dreny, hanao ahoana indray ny fanadinana ara-panjakana raha toa tsy misy ny vahaolana?
INSPNMAD : NAMOAKA PARAMED 321 AFAKA MIASA AVY HATRANY